Cima kwaye ulungiselele iZithuba eziMnandi? | Martech Zone
Cima kwaye ukhethe iZithuba eziBalaseleyo?!
NgoLwesihlanu, Agasti 15, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Lo ngumbuzo ongaphezulu kwengxoxo endaweni yokuphawula. Amava am ngokubhloga kukuba ukungaguquguquki kuyo yonke into. Ukuba abafundi bakho balindele ukuba nemixholo emitsha mihla le, baya kubuyela kwindawo yakho yonke imihla ukufumana loo mxholo. Umbuzo olungileyo ngulo:
Zingaphi izihlandlo umtyeleli aya kubuyela kwiwebhusayithi yakho ukukhangela umxholo omtsha ngaphambi kwabo yeka ubuya?
Kudala ndenza uvavanyo kutshanje. Ayisiyo ndlela yesayensi endiyithathileyo, kodwa xa ndibhalayo Iposti yebhlog kwi Starbucks efumene ingqalelo enkulu (A), ndaye ndagqiba kwelokuba Masikhwele ukubona ukuba kuzakwenzeka ntoni.
Inqaku elinye elinomdla kukuba le post yayithandwa malunga neeyure ezingama-72 (B) emva kokuba ibhaliwe. Kubonakala ngathi kuthatha usuku ukuze abantu bacole umxholo kunye nosuku olongezelelekileyo lokuphendula nokubhala ngalo kwiibhloko zabo. Oku, kubuyise ukugcwala kwabantu kwindawo yam kusuku lwesibini. Ngomhla wesithathu (C), nangona kunjalo, ingqalelo yayisele iphelile kwaye ibhlog ibuyele kumanqanaba ayo aqhelekileyo abatyeleli bemihla ngemihla (ngaphandle kwababhalisi be-RSS abangama-2,000 XNUMX).
Inyani yokuba ibhlog ibuyele kumanqanaba aqhelekileyo (de I-Tuned kwi-Calculator bt) ibonisa kum ukuba Digg or Ukhubeka Ukugcwala, nangona kukhuthaza, ayisiyiyo indlela endilandelayo. Aba ngabatyibilikisi bokwenyani- bafumana umxholo onomdla ngaphandle kodwa bangabuyeli ngaphezulu. Ndilandela abantu ababuyayo-abantu ababhalisela ukutya kwam, bandwendwela rhoqo, kwaye bathathe inxaxheba kwiingxoxo endizibeke apha.
Kwimeko yemidiya eqhelekileyo, ngendiyeke i-buzz iqhubeke ngaphambi kokuyiphazamisa ngeposi entsha kunye nesihloko esitsha. Ndiza kuqhubeka ndizama 'ukukhwela umtshangatshangiso', mhlawumbi ndiqhubeke nencoko kwi-2 okanye kwi-3 izithuba ezongezelelweyo. Nangona oko kunokuba kuncede ukugcina inani le (B) okwethutyana iindwendwe ezandifumana iiyure ezingama-48 ukuya kwezingama-72 emva kweposi, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiqhubeke nokuthumela yonke imihla- yeyam umbilini abafundi (C) abaqhubeka nokubuyela kwibhlog yam.
Kulula ukugcina abafundi kunokufumana ezintsha. Ukutsiba kuloo diggwagon kufana nokusuka kumgama weembaleki uye kwi-sprint. Imarathon yakha ukufundwa okungundoqo, ukuhamba ngokungaguquguqukiyo nangabom, Ukuhlangabezana nokulindelweyo kubabhalisi bakho abaphambili. I-Sprint yinto edinisayo yokwenza abanye bavotele wena, ukubhala ikhonkco kumxholo olindelweyo, kunye nokuzama ukufumba kwinduli entsha yabafundi bethutyana mihla le. Ungayenza, kodwa andiqinisekanga nokuba uza kukwazi ukulugqiba ugqatso okanye hayi.
tags: Uhlalutyoukukopelaziqhekekemzantsiuhlalutyo lwepinterestUkunyuswa kwepinterest
Siya vs. Wena! Ngaba ubukele?
Agasti 15, 2008 kwi-10: 24 AM
Agasti 16, 2008 kwi-6: 49 AM
Sep 4, 2008 ngo-5:00 PM